Voaova no mamantatra ny teny navigateur in 12 miseho amin'ny fiteny sy ny teny izay isanisany.
Raha ny teny dia tsy miseho, Tsindrio eto raha anglisy pejy izay azo adika amin'ny alalan'ny navigateur.
2. Masìna ianao, misafidy iray amin'ireo bokotra etsy ambany ny tapakila voafidy izay mifanitsy ny rafitra miasa.3. Mba hamerina ny LC Tech Guide Activation Process noho ny toromarika ao amin'ny fehezan-dalàna ny fahazoana mampiasa ny fampahavitrihana ny RPRID serial isa.
2. Azafady mifidiana ny bokotra noho ny rafitra miasa. Ity bokotra eto ambany no misy ny vidin voafantina.3. Manazava ny fomba hahazoana ny fampahavitrihana ny serial fango alalan'ny isa RPRID, fitsidihana LC Tech Guide Activation Process2. Mifidiana iray amin'ireo tapakila voafantina hita ambanin'ny bokotra hifidy ny rafitra ampiasainao.3. Lea amin'ny LC Tech Guide Activation Process ny torolalana mba hahazo ny fampahavitrihana fehezan noho ny serial isa RPRID.2. Dia mba mifidiana iray amin'ireo bokotra etsy ambany ny voafantina tapakila, ny ny rafitra fandidiana entsprichtt.3. Vakio ny LC Tech dingana toromarika fampahavitrihana sy manaraka ny toromarika, fampahavitrihana ny fehezan-dalàna mampiasa ny RPRIDzu nahazo serial isa.2. Ataovy ny safidy avy、Button ny tapakila eto ambany miasa amin'ny rafitra mifanaraka amin'ny voafantina。3. Rehefa mampiasa ny serial isa mba hahazoana ny fampahavitrihana fehezan-dalàna RPRID，Jereo mifandray amin'ny asaLC Tech Guide Activation Process。 2. Mifidiana iray amin'ireo bokotra eto ambany ity mba hifidy tapakila miankina amin'ny rafitra fandidiana mampiasa.3. Mikasika ny fomba hahazoana ny fampahavitrihana fehezan-dalàna mampiasa ny serial isa RPRID
LC Tech Guide Activation ProcessMba jereo ny. 2. Tsindrio ny iray amin'ny bokotra eto ambany ny tapakila nofidinao, izay mifanitsy ny rafitra ampiasainao.3. azafady manondro LC Tech Guide Activation Process ny torolalana mikasika ny fomba hahazoana ny fehezan-fampahavitrihana ny serial isa RPRID.2. Anisan'ny tsindry izay voafantina hita ambany ny tapakila, Fanteno ny bokotra izay mifanitsy ny rafitra miasa.3. Mankanesa ao amin'ny LC Tech Guide Activation Process Mba jereo ny toromarika ho an'ny fampahavitrihana fehezan-dalàna Amin'ny alalan'ny isa serial RPRID.2. azafady, ambanin'ny voafantina tapakila Click, ilaina ny rafitra miasa.3. azafady, Vakio ny LC Tech Guide Activation Process ny torolalana mikasika ny fomba hahazoana ny fampahavitrihana fehezan-dalàna mampiasa serial isa RPRID.
2. Dia mba mifidiana iray amin'ireo bokotra eto ambany ny voafantina voucher izay mifanaraka amin'ny rafitra miasa.3. Mba jereo LC Tech Guide Activation Process Fa toromarika momba ny fampahavitrihana mahazo mampiasa ny serial isa izay manomboka amin'ny fehezan-dalàna ny fanafohezana RPRID.2. Please, mifidy iray amin'ireo bokotra eto ambany ny notsongaina tapakila izay mifanitsy ny rafitra miasa.3. Mba hamerina ny LC Tech Guide Activation Process noho ny toromarika mikasika ny fomba hahazoana ny fampahavitrihana fehezan-dalàna mampiasa ny serial isa RPRID.2. Ny voafidy tapakila eto ambany ny bokotra mba hifidy izay mifanitsy ny rafitra ampiasainao.3. Review LC Tech Guide Activation Process Ny toromarika mba hahazo ny fampahavitrihana fehezan-dalàna mampiasa ny RPRID serial isa.
Raha nahazo tapakila amin'ny SanDisk® ho maimaim-poana 2 taona fampahavitrihana ny RescuePRO Deluxe for SSD, azafady manaraka ny toro-lalana etsy ambany mba télécharger ny afaka 2 taona fampahavitrihana manaova ny RescuePRO® Deluxe for SSD rindrambaiko:
1. Ity ambany ity azafady mifidy izay no raisina amin'ny tapakila ny SanDisk SSD.
>>>>Soso-kevitra: Ny tapakila ao hilaza hoe RescuePRO® Deluxe for SSD.
Ity rindrambaiko ho an'ny SSD ny (State mafy aelin'ny).
Fa Flash haino aman-jery, toy ny karatra SD, microSD karatra, USB aelin'ny, hifidy RescuePRO® Deluxe amin'ny an-tampon'ny ity pejy ity.
2. Masìna ianao, misafidy iray amin'ireo bokotra etsy ambany ny tapakila voafidy izay mifanitsy ny rafitra miasa.3. Mba hamerina ny LC Tech Guide Activation Process noho ny toromarika ao amin'ny fehezan-dalàna ny fahazoana mampiasa ny fampahavitrihana ny RPSSD serial isa.** aza hadino fa: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe for SSD with a serial number that begins with RPDLX-00602,
Ny serial isa izay pirinty amin'ny tapakila Diso.Tokony hanomboka amin'ny RPSSDYou will then need to provide your complete RPDLX-0602 serial isa ny SanDisk mba handray ny fanoloana. **RescuePRO® Deluxe for SSD
** Izany no diso pirinty tapakila
Mba mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina, ary rehefa mihazakazaka izany voalohany, you will then be prompted to activate your software. Avy eo dia homena ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Mba araho ilay rohy ary fenoy amin'ny endrika, Aza adino ny mampiditra ny serial isa hampavitrika ny maimaim-poana ny RescuePRO® rindrambaiko. Tsindrio eto ho dingana-by-dingana mpitarika ny fampahavitrihana
Raha ny ordinatera ianao dia tsy fametrahana tamin'ny mifandray amin'ny aterineto, you may email your activation request number to RescuePRO® Support, ary afaka manome anao ny Activation Code.
To mifandray aminay, azafady mifidy ny rafitra miasa avy ny bokotra eto ambany, ary hiroso ho any amin'ny Contact Us teny ho an'ny rafitra miasa. na tsy izany, azafady niantso anay (US) fiantraikany maimaim-poana (866) 603-2195, na eto an-toerana (727) 449-0891. Fa Europe call +44 (0)115 704 3306
Mba mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina. Rehefa nanomboka voalohany, dia ho nangataka hampavitrika ny rindrambaiko. Ho afaka mampiasa rohy maka anao eo amin'ny fampahavitrihana pejy. Tsindrio ny rohy sy hamita ny endrika, aza hadinoina ny mamaritra ny serial isa handray ny dikan-maimaim-poana ny rindrankajy RescuePRO®.
Tsindrio eto ho fampahavitrihana tsikelikely Guide.
Raha ny solosaina amin'ny izay mametraka tsy manana fahafahana miditra aterineto, azo atao ny mandefa ny fangatahana isa fampahavitrihana ny RescuePRO® Support mba handray ny fampahavitrihana fehezan-.
To mifandray aminay, dia mba mifidiana ny bokotra eto ambany mifanaraka ny rafitra miasa, ary hamita ny fifandraisana teny, na niantso antsika amin'ny (866) 603-2195 (isan'ny for US) na (727) 449-0891. Fa Eoropa, dia mifandraisa ny +44 (0)115 704 3306.
Mba mametraka ny rindrankajy amin'ny solosaina. Rehefa manomboka izany voalohany, Ho nanontany, Mba hampavitrika ny rindrambaiko. Ianao, dia handray ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Mba hanaraka ity rohy ity ary fenoy ny teny. Aza adino ny hiditra ny serial isa, hampavitrika ny maimaim-poana ny RescuePRO®Software.
Tsindrio eto ho dingana-by-dingana mpitari-dalana hampavitrika.
Raha tsy ny solosaina mifandray amin'ny ny mametraka ny rindrankajy ao amin'ny Internet, Azonao atao ny mandefa ny fampahavitrihana fangatahana maro amin'ny alalan'ny e-mail ny RescuePRO® fanampiana, mba hahafahantsika manome anao amin 'ny fampahavitrihana fehezan-misy.
Hifandray aminay, azafady misafidy iray amin'ireo bokotra eto ambany araka ny rafitra miasa, ary mivoaka miaraka amin'ny tsirairay fifandraisana. na tsy izany, niantso antsika amin'ny (US) fiantraikany maimaim-poana (866) 603-2195 ambany, na an-toerana (727) 449-0891 ny. Antso avy any Eoropa +44 (0) 115 704 3306
Mba mametraka ny rindrankajy amin'ny solosaina，Rehefa mihazakazaka aloha ny rindrambaiko，Raiso avy hatrany，Mamela anao hampavitrika ny rindrambaiko。dia，Ianao hahazo rohy，Ity rohy ity dia afaka miditra ny fampahavitrihana pejy。Azafady tsindrio eo ny rohy pejy，Fenoy ny teny，Ataovy azo antoka fa ny serial isa，Mba hampavitrika ny dikan-maimaim-poana ny rindrankajy RescuePRO®。 tsindrio eto，View fampahavitrihana dingana Guide.
Raha toa ny solosaina ianao fametrahana ny rindrambaiko tsy misy Internet，Azonao atao ny mandefa e-mail amin'ny RescuePRO® tohanan'ny fampahavitrihana ny fampiharana fehezan-dalàna，Afaka manome anao amin 'ny fampahavitrihana fehezan-。
Mba hahazoana Nifandray taminay，Dia mba mifidiana ny rafitra miasa avy manaraka ireto bokotra，Dia niditra ny rafitra ampiasainao mety ho hifandray antsika hamorona，Afaka ihany koa ny miantso (US) fiantraikany-maimaim-poana(866) 603-2195，Na an-telefaonina an-toerana(727) 449-0891，Europe +44 (0)115 704 3306
Rehefa mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina, hazakazaka voalohany, Ianao dia hahazo bitsika mba hampavitrika ny rindrambaiko. Avy eo tonga ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Azafady fenoy ny endrika amin'ny fanarahana ny rohy. Fenoy azafady ny serial isa hampavitrika ny maimaim-poana ilay rindrankajy RescuePRO®
Tsindrio eto raha manaraka ny dingana-by-dingana toromarika ho an'ny activating.
Raha ny ordinatera izay efa napetraka dia tsy mifandray amin'ny Internet, Ny RescuePRO® Support Azonao atao ny mangataka ny fampahavitrihana fehezan-amin'ny alalan'ny e-mail fangatahana. Raha izay no mitranga, dia afaka manome ny fampahavitrihana fehezan-dalàna ho anao
Fa Consultation azafady hifidy ny rafi-miasa avy amin'ny bokotra eto ambany. Azafady fenoy ny Contact Us Nohavaozina taminy ny rafitra ampiasainao. Raha tsy izany, Free Call Number (USA)(866) 603-2195 Na faritra fehezan-dalàna (727) 449-0891Aza misalasala miantso. Eoropa isa +44 (0) 115 704 3306 The.
Mametraka ny rindrankajy amin'ny solosaina, ary rehefa mihazakazaka voalohany, ianao dia hahazo bitsika mba hampavitrika ny rindrambaiko. Ianao dia nanome rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Araho ny rohy sy hamita ny endrika, fanaovana adino ny mampiditra ny serial isa hampavitrika ny maimaim-poana ilay rindrankajy RescuePRO®.
Tsindrio eto ho dingana-by-dingana mpitari-dalanafor fampahavitrihana.
Raha ny solosaina ianao izay fametrahana ny rindrambaiko dia tsy mifandray amin'ny Internet, dia afaka mametraka ny isan'ny RescuePRO® fangatahana fanohanana fampahavitrihana, dia homenay anareo ny fampahavitrihana fehezan-.
fifandraisana, hifidy ny rafitra ampiasainao amin'ny fipihana ny bokotra eto ambany ary fenoy ny endrika Contact us noho ny rafitra miasa. na, -tsy izany, telefonaci (US) ny isa maitso (866) 603-2195, eo an-toerana (727) 449-0891. Fa Europe miantso +44 (0) 115 704 3306
Mametraka ny rindrankajy amin'ny solosaina, Ary ny voalohany fivoriana, Nanosika hampavitrika ny rindrambaiko. dia, Ianao dia hahazo ny rohy ho an'ny tanterahina. Mahazo ny rohy ary fenoy ny teny. Aza adino ny manamarika ny serial isa hampavitrika ny maimaim-poana ilay rindrankajy RescuePRO®. Tsindrio eto raha Operation dingana Guide.
Raha toa ny solosaina ianao fametrahana ny rindrambaiko dia tsy mifandray amin'ny Internet, Azonao atao ny mandefa e-mail”Ny isan'ny asa fanohanana ny fampiharana RescuePRO®, Ary dia hanome anao amin 'ny fampahavitrihana fehezan-.
To mifandray aminay, Fidio ny rafi-miasa eo amin'ny manaraka bokotra sy ivoahan'ny Contact Us (Contact Us) Manan-danja ny rafitra miasa. na, Antsoy izahay (US”In) Toll-maimaim-poana isa(866) 603-2195, Na antso an-toerana(727) 449-0891. Eoropa resaka, Antsoy +44 (0)115 704 3306
azafady, mametraka ny rindrankajy amin'ny solosaina sy ny, Rehefa mihazakazaka izany voalohany, ianao dia hahazo bitsika mba hampavitrika ny rindrambaiko. Ianao, dia handray ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. azafady, Tsindrio ny rohy ary fenoy ny teny, Ampidiro ny serial isa hampavitrika maimaim-poana dika mitovy amin'ny fandaharana RescuePRO®. Tsindrio eto raha hijery ny walkthrough, ny fampahavitrihana dingana.
Raha ny solosaina, amin'ny izay mametraka ny fandaharana, tsy mifandray amin'ny Internet, azonao atao ny mandefa e-mail fampahavitrihana ny fangatahana isa ho fanohanana RescuePRO®, ary dia handefa anareo ny fampahavitrihana nangataka fehezan-dalàna
To mifandray aminay, mifidy, azafady, ny rafitra miasa tamin'ny alalan'ny fanerena ny mety bokotra eto ambany ka mankanesa any amin'ny endriky ny fitsaboana ho fanohanana ho an'ny rafitra miasa. Afaka niantso anay (isan'ny-maimaim-poana ao amin'ny US) (866) 603-2195, na ny eo an-toerana fanitarana (727) 449-0891. Fanohanana ny maro Eoropeana mpanjifa +44 (0)115 704 3306
Mba mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina, ary rehefa mitantana ny voalohany ianao, dia ho nangataka hampavitrika ny fandaharana. Rehefa afaka izany, dia homena ianareo rohy amin'ny pejy fampahavitrihana. Mba araho ilay rohy ary fenoy ny endrika, ka Aza adino ny mampiditra ny serial isa hampavitrika maimaim-poana dikan-tenin'ny fandaharana RescuePRO®. Tsindrio eto raha haka ny drafitra ny dingana fampahavitrihana Guide
Raha toa ny fitaovana fametrahana azy io ianao mifandray amin'ny Internet dia tsy, dia afaka mandefa fangatahana maro ho an'ny fampahavitrihana ny fanohanany an'i RescuePRO® ara-teknika, dia afaka manome anao ny fampahavitrihana fehezan-dalàna.
Hifandray aminay, azafady mifidy ny rafitra miasa avy ny bokotra eto ambany, ary hanaraka-niakatra ho any amin'ny modely “Contact Us” Fa ny rafitra ampiasainao. Na tsy izany, dia afaka mifandray aminay amin'ny isan'ny isa-maimaim-poana ao amin'ny United States(866) 603-2195 Na antso an-toerana.(727) 449-0891
Mba mifandray avy any Eoropa: +44 (0)115 704 3306
Mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina ary avy eo mihazakazaka izany voalohany, Izany, dia ho alefa any hampavitrika ny rindrambaiko. Avy eo dia homena ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Araho ny rohy ary fenoy amin'ny formuário, fanaovana adino ny mampiditra ny serial isa hampavitrika ny maimaim-poana ilay rindrankajy RescuePRO®.
Tsindrio eto ho dingana-by-dingana mpitari-dalana ho an'ny fampahavitrihana.
Raha ny solosaina no toerana manao ny fametrahana dia tsy mifandray amin'ny aterineto, Azonao atao ny mandefa ny fampahavitrihana fangatahana maro ho an'ny RescuePRO® Support ary afaka manome anao amin 'ny Activation Code
To mifandray aminay, mifidy ny rafitra miasa avy ny bokotra eto ambany ary miroso amin 'ny endrika miasa Contact ho an'ny rafitra. na, -tsy izany, Miantso antsika (USA), maimaim-poana isa (866) 603-2195 na eto an-toerana (727) 449-0891. Fa Europe call +44 (0)115 704 3306
Mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina, Ary raha mihazakazaka izany voalohany, Ianao dia hahazo bitsika mba hampavitrika ny rindrambaiko. Dia homena ny rohy mankany amin'ny pejy fampahavitrihana. Araho ny rohy ary fenoy ny teny, RescuePRO® ny maimaim-poana ny rindrambaiko, Aza adino ny mampiditra ny serial isa hampavitrika. Tsindrio ny dingana-by-dingana amin'ny mpitari-dalana ho an'ny fampahavitrihana.
Dia napetraka ao amin'ny solosaina dia tsy mifandray amin'ny Internet, Noho izany dia afaka isan'ny e-mail ny fampahavitrihana fangatahana fanohanana RescuePRO®, Ary afaka manome anao amin 'ny fehezan-fampahavitrihana.
Us mba hifandray, Dia mba mifidiana ny rafi-miasa avy amin'ny bokotra eto ambany ary miroso amin 'hamorona hifandray antsika noho ny rafitra ampiasainao. na tsy izany, Masìna ianao, aoka isika mahalala (US) Toll Free (866) 603-2195, na eto an-toerana (727) 449-0891 Antsoy. Miantso an'i Eoropa +44 (0) 115 704 3306